३१ श्रावण २०७७, शनिबार ११:५४
के तपाईं आफ्नो जीवनमा कसैलाई समावेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
यदि प्रश्न ‘हो’ मा आउँछ भने तल दिइएका प्रश्नले तपाईंको दिमागमा घर जमाएको हुनसक्छ ।
प्रविधिको दुनियाँमा अनलाइन डेटिङको चलन बढ्दो छ । आज मानिसहरु इन्टरनेटमा नै पार्टनरको खोजी गर्न रुचाउँछन् । तर लाखौं मानिसबीच आफू कस्तो देखिने हुँ भन्ने पिरले तपाईंलाई सताएको हुनसक्छ । तर, चिन्ता नलिनुहोस् । तपाईं जब कुनै नयाँ तस्बिर हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईंको अघिल्लो तस्बिरभन्दा राम्रो देखिन्छ ।
अर्थात्, सुन्दरताको विषयमा हाम्रो धारणा परिवर्तन भइरहन्छ । डेटिङ एपमा परिवर्तन भइरहने तस्बिरले हाम्रो सुन्दरताको मानकलाई निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । यदि तपाईंलाई सुन्दर मानिसहरुको प्रोफाइल हेरेर हिनताबोध भइरहेको छ भने त्यसलाई मनबाट निकाल्नुहोस् । किनभने यो अस्थायी हो, स्थायी होइन ।
विपरितले सधैं आकर्षित गर्दैन
केही विशेष बानी हुन्छन् जुन दुबै साथीमा भए राम्रो मानिन्छ । ‘विपरितले आकर्षित गर्छ’ यो भनाई निकै पुरानो हो र गलत पनि । पार्टनरबीच जति नै भिन्नता भएपछि कुनै पनि कुरामा सहमत हुने बानी मिल्नुपर्छ । अत्यधिक रिस उठाउने बानी आखिर कसलाई राम्रो लाग्छ र ?
विवाहले खुसी बढाउँछ तर
जो व्यक्ति लामो वैवाहिक सम्बन्धमा थिए, उनीहरुले सम्बन्धविच्छेदपछि ठूलै परिवर्तन देखाउँछन् । अधवैंसे मानिसहरुमाथि गरिएको अनुसन्धानमा पत्ता लागे अनुसार सम्बन्धविच्छेद पछि महिलामा खुल्लापन आउँछ । तर पुरुषले भने ब्रेकअपलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्दैनन् । उनीहरु सम्बन्धविच्छेद पछि सनकी हुन्छन् ।
सम्बन्धविच्छेदपछि महिला होस् वा पुरुष दुबै कम विश्वासिला हुन्छन् । सम्बन्धविच्छेदपछि तपाईं आफूलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ यो कुरा तपाईंको व्यक्तित्वमा भर पर्छ । जो व्यक्ति बर्हिमुखी हुन्छन्, उनीहरु चाँडै नै दोस्रो विवाह गर्छन् ।
कुनै एक साथीसँग जीवन बिताउनु हरेक समाजमा आदर्श मानिन्छ । तर नयाँ जमानाको चलन भने भिन्न छ, अहिले एकै समयमा धेरैसँग सम्बन्ध बनाउने प्रचलन छ ।यो धोका होइन । कुनै सम्बन्धमा संलग्न मानिसहरु एक–अर्काको अनुमतीमा नै एकभन्दा बढी मानिससँग सम्बन्ध बनाउँछन् ।
विवाहले खुसी त बढाउँछ तर